Nagaa biyyaa eegsisuuf Mirgi baqattootaa dhiitamuu hin qabu
Dilbata, Guraandhalaa 14, 2016 Local time: 11:01
Mootummaan Keeniyaa baqattoonni biyya isaa keessa jiran mooraa baqataatti akka galaniif ajaja kennuun isaa ni yaadatama. Gidduu kana garuu baqattoota galmaa’anii seeraan jiran magaalaa Naayroobii keessaa qabee hidhaa jira jedhu baqattoonni.
Gareen kabajamuu mirga namaaf falmu kan Keeniyaas mootummaan Keenyaa nageenya biyyaa eegsisuu dhaaf mirga baqattootaa cabsuu hin qabu jedha.
Gaaffii fi deebii gaggeeffanne armaa gadiitti caqasaa.
Gaaffii fi deebii gaggeeffanne armaa gadiitti caqasaa.i